Midowga Afrika oo kala dhex galay Xiisadda Itoobiya iyo Masar - Jowhar Somali news Leader
Home News Midowga Afrika oo kala dhex galay Xiisadda Itoobiya iyo Masar
Midowga Afrika oo kala dhex galay Xiisadda Itoobiya iyo Masar
Ururka Midowga Afrika ayaa kala dhex galay xiisadda ka dhex taagan Masar iyo Itoobiya ee ku saabsan biyo xireenka Wabiga Nile ee ay dhisatay Itoobiya.
Wada hadal khadka muuqaalka ay ku yeesheen Madaxda saddexda dal Itoobiya, Masar, Sudan oo ay wehliyeen Madaxweynaha Koofur Afrika oo xilligan ah Hoggaamiyaha Midowga Afrika iyo Guddoomiyaha Guddiga Midowga Afrika ayaa la isku raacay in aysan Itoobiya bilaabin buuxinta biyo xireenka.
Ra’iisul Wasaaraha Sudan Abadalla Hamdouk ayaa sheegay in saddexda dal ay isla garteen in dib loo bilaabo wada hadaladii hakada todobaadkii hore.
Arrinta Xiisada biyo xireenka Wabiga Nile ayaa todobaadyadii u dambeeyay sii xoogeysatay, waxaana labada dal Itoobiya iyo Masar ay bilaabeen diyaar garow dhinaca milateriga oo laga cabsi qabay in labada dal dagaal ka dhex qarxo.
Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey ayaa la filayaa in todobaadkan uu shir gaar ah ka yeesho dalabka Masar iyo Sudan oo ah in Golaha Ammaanka soo farageliyo is mari-waaga ka taagan biyo xireenka Wabiga Nile ee ay dhisatay Itoobiya.